Laba siyaabood oo aad hoos Mountain Libaaxa in Libaaxa
> Resource > Mac > laba siyaabood oo hoos Mountain Libaaxa in Libaaxa
Tan iyo markii aad halkan u joognaa, laga yaabee mar hore aad ku rakiban beta OS X Mountain Libaaxa 10.8 Beta / Developer ee xiisaha leh iyo dhibaatooyin ka heli qaar ka mid ah waxaa la. Inaad dareentid in wax in aad u baahan tahay ma shaqeyn doono wax ka badan (gaar ahaan qaar ka mid ah barnaamijyada 3aad xisbiga iyo utilities) ay sabab u tahay arrinta incompatibility. Ama mashiinada aad u yar oo gaabis ka badan ka hor ka dib markii lagu casriyeeyo noqon. Ama waxaa laga yaabaa adiga oo aan dhistaan ​​caadooyinka macruufka in feature desktop. Aad Ugu dambeyntii laga yaabaa hoos Mountain Libaaxa in Libaaxa laga yaabaa xal wanaagsan. Haddii ay sidaas tahay, aad leedahay hoos ku qoran 2 fursadaha.
Habka 1: hoos la Time Machine dib
Haddii aad leedahay caado wanaagsan taageerto wax muhiim ah ka hor inta uusan gacanta, waxaad leedahay gole laga yaabaa in dib ka soo mashiinka mar oo weli 10.7 nidaamka libaax ku dhex jira. Haddaba, waxaan bilaabi halkan.
Reboot habka, riix doorasho "muhiimka ah halka nidaamka ilaa bilaabo dooro Recovery" ama wax kasta oo dib u soo kabashada waxa ku jira.
Dooro Soo Celinta From Time ee kaabta Machine "doorasho ka menu.
Dhex mara saaxir ah oo aad samaysay.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad boot ka ah Gadzhiyev HDD dibadda, qaab karaa HDD gudaha iyo Gadzhiyev Libaaxa dib. Haddii aadan haysan waqti mashiinka ama HDD dibadda dib ka hor inta casriyayn ah, ka dibna waxaad isku dayi kartaa hab kale hoos ku qeexan.
Habka 2: hoos by tirtiro disk iyo Internet-kabashada
Doorasho "Press ilaa aad dooran kartaa wadid aad boot.
Dooro xijaab kabashada xitaa uu ku leeyahay oo keliya OS Mountain Libaaxa 10.8 ah.
Hadda masixi disk oo dhan oo ay ku jiraan yaruna hadda (yaruna ka dhigan tahay Risaalo taas oo ka kooban aad OS). Waxaad heli doonaa si ay u doortaan utility disk aad hab dib u soo kabashada.
Ka dib markii la tirtiro dhammaan xogta, dooro dib Mac OS X. (Waxaad hubisaa in aad ku xiran cable Ethernet ama wifi oo isticmaala WPA / WPA2 sugida ah. The menu item Wi-Fi waa geeska kore ee midig ee shaashada. Riix icon in ay muujiyaan oo dhan Wi-Fi shabakadaha laga heli karaa. Riix magacaaga network doorbidayso iyo, haddii loo baahdo, waxay gali username iyo / ama password.)
Your nidaamka si toos ah u hubin doona oo nidaam u baahan yahay oo (sida caadiga ah version pre-rakiban) dib ka server ee Apple. Tusaale ahaan, haddii aad soo iibsatay aad Mac la Libaaxa lagu rakibay, markaas Libaaxa in dib loo doonaan habsami leh; haddii aad ka App Mac ka Store iibsaday Libaaxa, waxaa laguu keenay in dooni doona inay galaan ID Apple iyo password aad loo isticmaalaa in lagu soo gato Libaaxa.)
Muhiim: 1) hubiyo in dhammaan qoruhu waa la tirtirayaa hor reinstalling samee; haddii kale waxa laga yaabaa in aanu shaqeyn ama dib doonaa OS X Mountain Libaaxa halkii. 2) oo dhan Macs socda OS X ma ka faa'iidaysan karaan Internet-kabashada, laakiin dhawaan la-sii daayay Mac laga bilaabo mini Mac iyo MacBook Air kartaan. Haddii mashiinka ma Suite la munaasabadda kor ku xusan, waxaad dooran kartaa in ay qaataan Apple Recovery Disk Kaaliyaha , oo waxay ka caawisaa in la abuuro drive ah Recovery OS X Downlaods adiga oo isticmaaleya isticmaale gaar ah drive USB in uu wax kasta sameeyo inuu ka soo kabsado aad Mac, oo ay ku jiraan reinstalling OS X ka Apple server.